Daawo: Aadan Madoobe oo ku dhegan xukuumadda Rooble, dul dhigayna amar culus - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Aadan Madoobe oo ku dhegan xukuumadda Rooble, dul dhigayna amar culus
Daawo: Aadan Madoobe oo ku dhegan xukuumadda Rooble, dul dhigayna amar culus
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta golaha ayaa amar ku aadan miisaaniyadda cusub dul dhigay xukuumadda Ra’iisul Wasaare Rooble.
Guddoomiyaha ayaa xukuumadda ka dalbaday in miisaaniyadda ay ansixiyeen golaha wasiirrada loo soo gudbiyo guddoonka ka hor 12-ka bishaan, si loogu soo daro ajendaha golaha ee fadhigooda ugu horeeya.
Xildhibaanada oo fadhigoodii maanta uu u furmi waayey kooram la’aan ayaa dib isugu soo laabanaya 12-ka bishaan June, sida uu iclaamiyey guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe.
Ajendeyaasha ugu horeeya ee golaha la hor geynayo ayaa lagu wadaa inay ka mid noqoto miisaaniyadda dowladda ee sanadkaan 2022-ka, kaas oo la doonayo in goluhu uu ansixiyo.
Shirkii todobaad-laha ee golaha wasiirrada ayaa Khamiistii lagu ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadkan 2022-ka oo dhan (918.7 M) taas oo noqotay miisaaniyadii ugu badneed ee dalka burburkii kadib.
“Xukuumaddu miisaaniyadii waa diyaarisay, waxaan ka rabnaa in 12-ka bisha ka hor ay noo soo gudbiyaan miisaaniyadda, 12-ka June ayaan fadhiga ugu horeeya isugu imaa doonaa,” ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka.